Madaxweynaha Jubba oo bulshada Soomaalida iyo Jubbooyinka ugu baaqay in la is cafiyo – Radio Daljir
Madaxweynaha Jubba oo bulshada Soomaalida iyo Jubbooyinka ugu baaqay in la is cafiyo
Nofeembar 5, 2013 3:16 b 0
Muqdisho, November 5, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba sheikh Axmed Maxamed Islaan (Madoobe) ayaa ku dhawaaqay in la gaaray wakhtigii wada-shaqaynta iyo is cafiska, waxaa uu sheegay in uu cafiyey cid kasta oo isaga wax ka sheegtay.
Axmed Madoobe ayaa ka dalbaday shacabka Jubbooyinka iyo kuwa Soomaaliyeed intaba in ay isaga cafiyaan, waxaa uu xusay in uu jiro wax badan oo ka dhacay intii ay socotay siyaasada qalafsan ee gobollada Jubbooyinka.
Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba waxaa uu amaanay hanaanka uu u socdo shirka dib-u-heshiinta Jubbooyinka ee Muqdisho, ?dhamaanteen waxaan ku noqon doonaa Kismaayo innagoo gacmaha is haysana.? Ayuu yiri Axmed Madoobe oo ka hadlayey kulan xalay ka dhacay Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in ay hadda kadib u diyaar garoobi doonaan horumarinta deeganada iyo hanaanka maamulka ee deegaanada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaa uu hadalkiisa ku sii daray in ay qorshaynayaan in ay maamulada dalka isugu geeyaan Kismaayo si loo gaaro is afgarad iyo wada-shaqayn.
Puntland oo aqoonsi shaqo siisay shaqalaha kala duwan ee hay?adaha dowladda (Dhegeyso)
Ergada oo shrka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka ku sifeeyey mid heshiis buuxa lagu gaarayo (MAQAL)